Ilifa, ezinamatheleneyo, ukusebenza nempumelelo kwixesha elizayo
yi admin ngoMeyi-Thu-2018
NgoMeyi 12 kunye 14, ilungu yonke engundoqo imoto ukutya magic ezigcinwe ngempumelelo 2019 icebo ngonyaka kunye nolawulo seminar. Umxholo wale semina "Ilifa, ezinamatheleneyo, ukusebenza nempumelelo kwixesha elizayo", yaye wazimisela-qhinga yophuhliso nkampani ngowama-2019 kunye p ...
Ukutya lidibanisa amazwe ali-11, umbutho ukutya onegunya kunabo kwakhona ukuphosa nawasezincotsheni womnquma, wenze into!
Ngo December 8, i-China (Shaxian) Yidla uKhenketho neNkcubeko Festival kwangenisa yayo yokuzalwa yama-20. Kukho abangama-amazwe ali-11 ukusuka kweli lizwe, kuquka France, Brazil, India, kunye namazwe 11 nezinye, apho ukutya eziswayo kunye Sha County liphela, yaye abangaphezu kwe-100 ngamazwe kunye loca ...
imoto Magic Food Foreign Market R & D ISebe lisungule nabagqibeleleyo.
Ngenxa yokwanda kweenkampani imoto yokutyela mobile kunye ukubonakala iimveliso, inkcubeko imoto yokutyela mobile sele kuthandwa aphesheya. Xa ishishini elitsha emotweni lokutyela mobile, imoto ukutya magic Kudala kwaziwa ukuba namaTshayina. Le nkampani bokuqala kukhuphiswano ...
Ukuya nzulu endle emotweni venkile, inkampani iphefumlelwe imoto yokutyela Dubai kwaye ngoku inkampani iyayikhuthaza 100 lezigidi!
imoto ukutya Magic wathabatha iingcambu kuyilo kunye nokuveliswa imoto imoto yokutyela, waza wafumana uyilo amatsha inkuthazo e Dubai, edume isixeko inkcubeko imoto yokutyela yehlabathi. Le moto yaba lula ukuyisebenzisa yaye ezintle. Imveliso inkwenkwezi wadala inkampani edunyiswa kakhulu custo ...
Dubai Mobile Diner efumanise Guangzhou International Food Festival
ixesha-Enye ukutyelela Guangzhou International Food Festival ehlabathini lonke It ekugqibeleni esiza! ! ! Njengoko ukutya senior Kutheni mbile miss le gourmet ezulwini ukutya? Okunye ezingalindelekanga kukuba Kuthiwa iilori ukutya kwizitrato Dubai (Ukutya Truck) Hambiloko wabonakala Guangzhou Internation ...